Channel-Mandalay| Sputnik 2020)
ယခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့် ဇာတ်ကားလေး Sputnik ဆိုတဲ့ကားလေးပါ….. ယခုနှစ်မှထွက်ရှိထားပြီး…. IMDB 6.3 အထိ ရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ…… ဒီဇာတ်ကားဟာဆိုရင် လုံး၀ကိုစိတ်ကူးယဥ်ပုံဖော်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းပါ … computer ရိုက်ချက်တွေကလည်း ကောင်းလွန်းပါတယ်….
ကဲဇာတ်လမ်းလေးအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်… ၁၉ ရာစုနှစ်လောက်က အချိန်တွေကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားလို့လည်းပြောလို့ရပါတဟ်….. ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုက အာကာသထဲကို အာကာသလေယာဥ်တစ်စင်းလွှတ်တင်ခဲ့ပါတယ်.. အဲ့ဒီအာကာသ ယာဥ်က သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာ အရောက်သွားဖို့အတွက်ပါ… ပြောရရင် အာကာသထဲမှာ စူးစမ်းလေ့လာဖို့အတွက်ပေါ့…
ဒါပေမယ့် မထင်မှတ်ထားတာတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်…. ဒါကတော့ အာကာသထဲ ဂြိုလ်တစ်ခုပေါ်မှာရှိနေတဲ့… ကပ်ပါးတစ်ကောင်က အာကာသယာဥ်မှူးတစ်ယောက်ထဲကို ကပ်တွယ်လာခဲ့လို့ပါပဲ…. ဒီလိုနဲ့မြေပြင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်လာချိန်မှာတော့.. ကပ်ပါးကကောင်ဟာ အာကာယာဥ်မှူး ခန္ဓာကိုယ်ထဲ နှင့်အတူ ကမ္ဘာမြေကိုရောက်လာပါတော့တယ်…
ဒါတွေကို ကပ်ပါး အမှီပြုခံရတဲ့ အာကာသယာဥ်မှူး ဗက်ယူကော့ဗ် က လုံး၀ကိုမသိခဲ့ပါဘူး… ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကပ်ပါးကောင်က အလင်းရောင်မရှိတဲ့ ညဖက်အိပ်ပျော်နေတဲ့အခြေအနေ တစ်ခုမှာပဲ …လုပ်ရှားနိုင်လို့ပါ…ဒါတွေကြောင့် သူ့ကို… စစ်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းက ဖမ်းဆီးပြီးတော့ … စမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ပါတော့တယ်…
ဒါပေမယ့်လည်း ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်မရှိတာတွေကြောင့်…. တန်နာ ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး ဆရာ၀န်တစ်ယောက်ကို… ခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်….. တန်နာကလည်း လူနာကို သာမာန်နေမကောင်းလို့တစ်ရက်တစ်လေ လာကြည့်ပေးရမယ်ဆိုပြီး ထင်နေပါတယ်…..
ဒါပေမယ့် တန်နာ ထင်ခဲ့သလို မဖြစ်လာပဲ… ကပ်ပါးကြောင့်ဆိုတာသိလိုက်တဲ့အချိန်…… အဲ့ဒီကပ်ပါးကောင်ကိုလည်း စစ်ဗိုလ်ကြီးက … လက်နက် အဖြစ်အသုံးချဖို့ လူတွေကိုထိုးကျွေးနေတယ်ဆိုတာ သိသွားတဲ့အချိန်….. ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြဦးမလည်း……??